Nhọrọ Mgbake System (Ihe Ọ Bụ na Otu esi eji ya)
Nhọrọ Nhọrọ Nhazi
Nchịkọta nhọrọ nchịkwa nke System bụ otu nke nhazi Windows, weghachite, na ngwaọrụ nchọpụta.
A na-akpọkwa Nhọrọ Nhọrọ Nhọrọ dị ka Windows Iweghachite, ma ọ bụ WinRE maka mkpirikpi.
Malite na Windows 8, Nhọrọ Nhọrọ Iweghachite dochie anya Nhọrọ Di elu Malite .
Kedu ihe bụ Nhọrọ Nhọrọ Nhọrọ Njikere Jiri?
Ngwaọrụ dị na nhọrọ Nhọrọ Ntanetị nwere ike iji rụkwaa faịlụ Windows, weghachite ntọala dị mkpa na ụkpụrụ ndị gara aga, nwalee ebe nchekwa kọmputa gị, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Otu esi enweta Nhọrọ Nhọrọ Ntanetị
Usoro ntaneti ntanetị nwere ike ịnweta ụzọ dị iche iche:
Ụzọ kachasị mfe iji nweta Nhọrọ Iweghachite Nhọrọ bụ site na Ndozi Ngwá Ọrụ Kọmputa gị na menu Nhọrọ Advanced Boot .
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta nhọrọ elu Boot Nhọrọ ma ọ bụ Ndozi Ngwá Ọrụ Kọmputa gị adịghị adị (dịka ụfọdụ n'ime Windows Vista nrụnye), ịnwekwara ike ịnweta Nhọrọ Nhọrọ Ntanetụ na diski Windows Setup.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọghị n'elu ọrụ na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịmepụta diski nhazi kọmputa na kọntaktị kọmputa gị ma malite Nhọrọ Nhọrọ System site na iji diski nhazi kọmputa ahụ na kọmputa gị . N'ụzọ dị mwute, nke a na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na kọmputa abụọ na-agba Windows 7.
Otu esi eji Nhọrọ Nhọrọ Ntaneti
Nchịkọta nhọrọ nchịkwa nke System bụ nanị menu ka ọ ghara ime ihe ọ bụla n'onwe ya. Ịpị otu n'ime ngwaọrụ ndị dị na Nhọrọ Nhọrọ Ntanetị ga-amalite ọrụ ahụ.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, iji Ndaghachi Ntọala Nhọrọ pụtara iji otu n'ime ngwaọrụ mgbake ahụ dị na menu.
N'okpuru ebe a bụ nkọwa na njikọ maka nkọwa zuru ezu banyere ihe mgbake ise ị ga-ahụ na Nhọrọ Nhọrọ Ntanetị na Windows 7 na Windows Vista:
Mmalite ịrụ ọrụ
Ntọala Mgbalite amalite, ị chepụtara ya, Nwepu Nwepu Ngwá ọrụ nke nwere ike idozi ọtụtụ nsogbu na-egbochi Windows iji malite n'ụzọ ziri ezi.
Hụ Olee Otú m ga-esi malite ịrụ ọrụ? maka nkuzi zuru ezu.
Nkwụnye Mmalite bụ otu n'ime ihe ndị dị oké ọnụ ahịa usoro mgbake dị na menu Nhọrọ Nhọrọ
Usoro nkwụghachi nke System amalite System Restore, otu ngwá ọrụ ị nwere ike iji tupu Windows.
N'ezie, uru nke inwe Nweghachi System sitere na Nhọrọ Nhọrọ Nhọrọ Nhazi bụ na ị nwere ike ịnweta ya site na mpụga Windows, ọ bụrụ na ị nweghị ike ịnweta Windows.
Iweghachị usoro nchịkwa
Iweghachị nchịkwa nke System bụ ngwá ọrụ ị nwere ike iji weghachite na kọmpụta gị nke mbụ kere ndabere zuru ezu nke draịvụ ike gị.
Iji Iweghachite nchịkọta nke igwe dị mma ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọzọ na-adabaghị nhọrọ mgbake, ma n'echiche, n'ezie, ị na-arụ ọrụ ma mepụta ihe oyiyi usoro n'oge ụfọdụ mgbe kọmputa gị na-arụ ọrụ nke ọma.
Na Windows Vista, a na-akpọ Ngwá Ọrụ Nhọrọ Iweghachite a dịka Windows Complete PC Restore .
Nchekwa Windows Memory Diagnostic
Windows Memory Diagnosis (WMD) bụ usoro nyocha nyocha nke Microsoft kere. Ebe ọ bụ na nsogbu na nchekwa ihe nchekwa gị nwere ike ịkpata ụdị Windows ọ bụla, ịnweta ụzọ iji nwalee RAM site na Nhọrọ Nhọrọ Ntanetị bụ ihe bara uru.
Ncheta Windows Memory Diagnostic enweghị ike ịme ngwa ngwa site na Nhọrọ Nhọrọ Ntanetị. Mgbe ịhọrọ Windows Memory Diagnosis, enyere gị aka ma ọ bụ Malitegharịa ekwentị ahụ ozugbo ma nwee nyocha ncheta na-agba ọsọ na-akpaghị aka, ma ọ bụ na-agba ọsọ na-akpaghị aka mgbe ọ bụla ị malitegharịa kọmputa gị.
Iwu ahụ nke siri ike site na nchịkwa nhọrọ Ntaneti ntanetị bụ otu Iwu ahụ I nwere ike iji n'oge Windows.
Imirikiti iwu ndị dị site na Windows dịkwa site na Nkume Iwu a.
Nhọrọ Nhọrọ System & nkwupụta ụda; Akwụkwọ edemede
Akwụkwọ mpịakọta nke Windows gosipụtara na-arụnyere na mgbe Nhọrọ Nhọrọ Ntaneti ọ gaghị abụ mgbe niile ị maara.
Dịka ọmụmaatụ, a ga-achọpụta ụgbọala nke Windows arụnyere na C: mgbe Windows, ma D: mgbe ị na-eji ngwaọrụ mgbake na Nhọrọ Nhọrọ. Nke a bụ ihe bara uru karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'ime Iwu ahụ.
Nhọrọ Mgbake Nhọrọ ga-akọ na ụgbọala ahụ arụnyere Windows na n'okpuru Nhọrọ nhazi isi mgbake na isi nchịkọta Nhọrọ Nhọrọ. O nwere ike ikwu, dịka ọmụmaatụ, sistemụ arụmọrụ: Windows 7 na (D :) Disk mpaghara .
Nhọrọ Nhọrọ Nchọta nke System
Nchịkọta nhọrọ ntanetị nke System dị na Windows 7 , Windows Vista , na ụfọdụ sistemụ arụmọrụ Windows.
Malite na Windows 8 , a na-eji Nhọrọ Mgbake Nhọrọ dochie anya nhọrọ ọzọ nke a na-akpọ Advanced Startup Options.
Ọ bụ ezie na Windows XP enweghị Nhọrọ Nhọrọ ntanetịime, Ndozi Wụnye na Iweghachite , ma dịnụ mgbe ị na-agbapụta na CD XP Setup, yiri nke Mmalite Idozi na Iwu Kwụsị, n'otu n'otu. Ọzọkwa, Windows Memory Diagnostic nwere ike ibudata ma jiri onwe ya na PC na-agba ọsọ ọ bụla sistemụ.
Top 5 Edition Windows
Njikwa Task: A Complete Walkthrough
Gịnị mere na ọ bụghị Dropbox, bọtịnụ Google, etc. Na ndepụta gị?
Otu esi jikọọ na netwọk ikuku na Windows 7
Ọnọdụ Nchekwa (Ihe Ọ Bụ na Otu esi eji ya)
A Tour nke Windows 10 Malite NchNhr
Ọ Dị Mkpa Maka Ndị Na-eme Ngwá Ọrụ ProStreet maka PC
Otu esi esi melite ma jikwa ngalaba Facebook
Nhazi nchịkọta MAC: Ihe Ọ bụ na otú O si arụ ọrụ
6 Ihe ojoo ojoo: Nkpughe 'akuko nke oma
Ntọala Android nke Akụkọ ya, na enweghị Egwuregwu FMV
Esi Nyochaa Nchekwa Ozi niile na Outlook
LG na-ekwupụta ọkwa mbụ ya
Otu esi eme ka ndi ntaneti gi
6 Mkpa ihe dị mkpa maka ngwa ntinye
Kedu ihe bụ ADTS File?
Gịnị bụ RAID 10, na Mac m akwado ya?
Kedu ihe bụ ABW File?
Otu esi ebufee ekwentị ma ọ bụ laptọọpụ na bọmbụ
Kedu ihe Njikwa ntụziaka?
Otu esi tinye njikọ maka Ịbanye na Mac OS X Mail ma ọ bụ MacOS Mail
Otu esi echekwa foto nchedo IP gị n'igwe
Usoro nhazi ngwa ngwa maka iPad gị
Epson's Perfect V330 Scanner
Otu ndi otu ndi na - eso ndi mmadu na - akwado iji nweta ndi na - eso ndi ozo